Tatoazy, tantara ary dikany Yakuza | Ny fanaovana tatoazy
Tattoos Yakuza, tantara ary dikany
ny tatoazy yakuza, miaraka amin'ny karazana tatoazy rehetra avy any Japon (antsoina irezumi ao amin'io firenena io), mahavariana izy ireo.
avy eo ho hitantsika ny tantaran'ireo tombokavatsa ary ny maodely mahazatra indrindra izay mety ho hitantsika amin'ny endriny.
1 Tantaran'ny tatoazy yakuza
2 Ny fomba sy ny antony manosika
Tantaran'ny tatoazy yakuza
Ho an'ireo izay tsy mahalala, ny yakuza dia ireo olona izay ao anatin'ny mafia Japoney. Any Japon, ny tombokavatsa sy yakuza dia hevitra roa izay mifamatotra akaiky, satria nandritra ny fotoana fohy dia fady ny tatoazy eto amin'ity firenena ity. Ho fanampin'izay, talohan'ny vanim-potoana Edo dia nasiana tombokavatsa amin'ny tombokavatsa ny mpanao heloka bevava, izay nanampy ireo vondrona ireo hahatsapa ho tafakambana amin'ny ranomainty.
Taty aoriana, nandritra ny vanim-potoana Edo, nanjary lavitra kokoa ny endrika sy ny tatoazy, satria novolavolaina ny fomba iray manana ny endriny ary na ny mpanao tatoazy manokana ao amin'ny yakuza aza. Ankoatr'izay, ny tombokavatsa dia nanomboka hita ho fomba iray hanehoan'ny mpikambana ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny sefo na fianakaviana iray. Ny iray amin'ireo zavatra liana indrindra dia ireo tatoazy ireo nitafy tamin'ny toerana tsy tazana izy ireo (ny sternum ohatra dia tavela tsy misy tombokavatsa mba tsy ho hita raha manao kimono ilay olona manao tatoazy), tsy hoe noho ny volon-doha fotsiny, fa noho ny fanetren-tena izay mampiavaka ity kolotsaina ity.
Ny fomba sy ny antony manosika
Ny fomban'ny tatoazy yakuza dia miavaka amin'ny fananana loko toy ny maitso na mena amin'ny forongony izay mazàna lehibe, alokaloka ary mainty no loko lehibe. Inona koa, ny antony mahazatra ny kolontsaina japoney dia mahazatra, izay ampifandraisina amin'ny dikany.
Ohatra, Ny voninkazo serizy dia mifandraika amin'ny hatsarana sy ny fandehan'ny fotoana, karpa miaraka amin'ny maha-lehilahy, katana misy fahalalana sy hery, ireo bibilava fotsy misy fahendrena ...
Manantena izahay fa nahaliana anao ity lahatsoratra amin'ny tatoazy yakuza ity. Lazao aminay, fantatrao ve ireo curiosities ireo? Manana tatoazy iray entanin'ny tandindony ve ianao? Aza hadino ny milaza aminay ny zavatra tadiavinao amin'ny hevitra iray!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tattoo atsinanana » Tattoos Yakuza, tantara ary dikany
Tandindon'ny fisakaizana, mahazo aingam-panahy ho an'ny tatoazy manaraka!
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny tatoazy neotraditional?